ဆိုးသွမ်း: ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၁၀ )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:00 AM
အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် ဘာလုပ်ရမှန်းကို အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တကယ် မသိပါဘူး။ ကျောင်းတုန်းက သင်ပေးလိုက်တာ တွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာတွေက များတာရယ် ၊ စာတွေ့နဲ့ ယခုလက်တွေ့မှာက အခြေအနေရယ်နဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဆရာကြီးတွေ ရှိတယ် မဟုတ်လား။ တပ်ခွဲ အရာခံဗိုလ် ( CSM ) ၊ တပ်ခွဲတပ်ကြပ်ကြီး တို့ကို မေးပေ့ါ။ ဆရာကြီးတို့ရေ.... အရင်တုန်းကရော ဘာတွေလုပ်ကြလဲပေ့ါ။ အဘရော ဘာတွေခိုင်းသလဲပေ့ါ။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ သိပ်တော့ ဘာမှ မခိုင်းပါဘူး။ ကင်းစောင့် တာ နဲ့ ( ၁ ) ပတ်ကို ၂ ခါ သေနတ်တိုက်တာ လောက်ပဲ ခိုင်းပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ဆရာကြီးပဲ ခွဲပေးလိုက်ပါတော့ ကျွန်တော် စက်သွားတက် လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီ ဆက်သွယ်ရေး ရုံးခန်းကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဟိုရောက်တော့...အဘနဲ့ စက် ပြောတော့
အဘ ။ အောင်ထွန်းလား...အောင်ထွန်းလား ၊ အသံဘယ်လောက်ကြားလဲ....ဒါပဲ။
ကျွန်တော် ။ အောင်ထွန်းမှ အောင်အေး....အောင်ထွန်းမှ အောင်အေး ၊ အသံ ( ၅ ) ကြားတယ်..ဒါပဲ။
အဘ ။ အသံ ( ၅ ) ကြားရင် ၊ စိုးခိုင် အောင်ခိုင်အောင်နိင် ပေါက်ပါ ။
ကျွန်တော် ။ စိုးခိုင် နေကောင်းပါတယ် ၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ် မရှိပါ ။ ဒါပဲ
အဘ ။ အခြေအနေကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းပါ။ အုတ်ပုံမဲ့ ရက်ကို ပြန်ပေါက်ပေးမယ် ဒါပဲ ။
ကျွန်တော် ။ ၅၆ ၊ ၉၆ ပါ အောင်အေး ။
ဒါနဲ့ စက်တက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း ဟိုလျှောက်ကြည့် ဒီလျှောက်ကြည့်ပေါ့။ စခန်းပတ်ပတ်လည် လိုက်ကြည့်ရင်း ရောက်ရောက်ချင်းတုန်းက သေသေချာချာ မကြည့်မိပေမယ့် အခုလိုက်ကြည့်တော့ ကျွန်တော့်တို့ တာဝန်ယူရတဲ့ နယ်မြေက တရုတ်နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ကပ်လျက်ပါ။ ချောင်းတစ်ခုပဲ ခြားပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိင်ငံဘက်ခြမ်း၏ ကြားထဲမှာတော့ မြေပြန်လို့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ထိုမြေပြန့်မှာ ချောင်းလဲ ရှိတာကြောင့် တရုတ်နဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေက လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ စပါးစိုက်ကြတာပါ။ ရေသွင်းပြီးတော့ပေ့ါ။ တစ်ခုထူးခြားတာက တရုတ်နိင်ငံဘက်ခြမ်းမှာ နယ်စပ်ဆိုပေမယ့် လမ်းတွေ ၊ ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာတိုင်တွေက တောင်တွေကြားထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေနဲ့ နောက်ပြီး တောင်တွေပေါ်က သစ်ပင်တွေကိုလည်း တရုတ်အစိုးရက ခုတ်ယူခွင့် မပြုတာကြောင့် စိမ်းစိမ်းစိုစို နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြေရေးကို အထောက်အကူ ပြုတဲ့ အပြင် စစ်ရေးအရ ကြည့်မယ်ဆိုလျှင်လည်း ပုံဖျက် ဖုံးကွယ် ထားသလို ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဟဲ....ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘက်မှာလား ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ဘက်မှာလည်း တောင်တွေရှိတာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် တောင်ကတုန်းတွေပါ။ တောင်ယာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြတာ ကြောင့် သစ်ပင်တွေ ခုတ်ပစ်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါက နယ်စပ်ဒေသ ဆိုပေမယ့် အစွန်အဖျား ဒေသတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု အရမ်းကို နည်းပါး ပါတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်အကိုင် အနေနဲ့က ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ် မြှောက်မြှောက် လုပ်နိင်ခွင့် မရတာကြောင့် အများစုက မိမိဝမ်းစာ အတွက် သစ်ပင်တွေကို ခုတ်ထစ်ပြီး ဈေးမှာ လာရောင်းကြတာကြောင့် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်အတွက် မကောင်းပေမယ့် သူတို့မှာ အသိပညာ ဗဟုသုတ ဆည်းပူးနိင်ရန် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးတာ ကြောင့်လည်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို များစွာ ထိခိုက်နိင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ကြတော့ ကျွန်တော်လည်း စခန်းတွင်း အခြေအနေ အကုန်သိတာကြောင့် စခန်းပြင် အခြေအနေကို လေ့လာရန် အလို့ဌာ လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာပေ့ါ။ အဲဒီမှာ မြန်မာအသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ထပ်ဆင့် အသံလွှင်ရုံကို တာဝန်ယူရတဲ့ မိသားစုက လမ်းဘေးမှာ ဈေးဆိုင်လေး တည်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အစ်မကြီးကတော့ ရွှေပြည်သာက လာတာတဲ့။ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာ ကနေ ဒီကို ရောက်လာမှန်း မသိပါဘူး။ သားတစ်ယောက် ၊ ယောင်္ကျားကလည်း တော်တော် သဘောကောင်းပါတယ်။ နောက်ဆို စခန်းထဲမှာ နေတာကြာလာလို့ ပျင်းလာရင် ကျွန်တော်လည်း အဲဒီဆိုင်လေးမှာ သွားပြီး စကားသွားသွား ပြောဖြစ်ပါတယ်။ စခန်းနဲ့က မြင်နေရတော့ တစ်ခုခု ဖြစ်လည်း ပြန်လာလို့ ရတာကြောင့်ပါ။ သူတို့ရောင်းတာက တရုတ်ဆေးလိပ်တွေ ၊ ဆန်တွေ ၊ မုန့်သရေ စာတွေပါ။ ဖြက်သွား ဖြက်လာ ၊ ဈေးသွားဈေးလာ တွေကတော့ ( တိုင်းရင်းသားများ ) ၀ယ်ကြပါတယ်။ အဲဒီပထမဆုံး သိပြီး နေ့တုန်းက ညကျလျှင် ဆိုင်ရှေ့မှာ ကွင်းပြင်ကြီး ( ဂေါက်ကွင်း အစမ်းလေ့ကျင့်ရန် ) နဲ့ ညောင်ပင် အကြီးကြီး ရှိတာကြောင့် ဒီနေရာမှာ မီးပုံပွဲ ကျင်းပမည် ဖြစ်သောကြောင့် ၊ ည ၈ နာရီလောက် ထွက်ခဲ့ရန် ခေါ်ပါတယ်။ အစကတော့ ကျွန်တော် ငြင်းပေမယ့် အတန်တန် ခေါ်နေတာကြောင့်ရယ် ၊ ကျွန်တော်လည်း သူတို့ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ သိချင်တာကြောင့် လာခဲ့မယ်လို့ ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မနက်ဖြန်ဆို အဘက ပြန်လာတော့မှာ ။ အဲဒီအခါ ထွက်လို့ရ ချင်မှ ရမှာ မဟုတ်လား။ အဟဲ...စပ်စုချင်တာလည်း ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဟိုတစ်ယောက်က တိုးတိုး...နဲ့ ကပ်ပြောလိုက်သေးတယ်။ “ လာစမ်းပါ...ဗိုလ်လုံရာ ၊ ရှမ်းမလေးတွေ အများကြီးလာကြမှာတဲ့ ” ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ယောင်္ကျားလေးပဲ...ဘယ်ရမလဲ လာမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တာပေ့ါ။ သူတို့ရိုးရာ ဓလေ့ကို လေ့လာချင်တာ ကြောင့်ပါ။ အထင်တော့ မလွဲပါနဲ့း) ။ ညရောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း တာဝန်အတူပေးခဲ့တဲ့ ဆရာကြီးကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီ သွားခဲ့ပါတယ်။ တပ်ရင်းမှုး အဘက ကျွန်တော်က ငယ်သေးတာကြောင့် တလွဲတွေ လုပ်နေရင် ထိန်းပေးနိင်အောင်လို့ ဆရာကြီးကို ပါခေါ်ပြီး အတူတာဝန် ပေးထားတာပါ။ ဆရာကြီးနာမည်က အောင်မြင့်ကြည်ပါ။ မျက်နှာက မော့စ်နဲ့ တော်တော် တူပါတယ်။ နုတ်ခမ်းမွှေးထားတာက အစ။ သဘောအရမ်း ကောင်းသလို အလိုက်လဲ အရမ်းသိတဲ့ ဆရာကြီးတစ်ယောက်ပါ။ သူက လည်း သွားပါ ဗိုလ်လုံ ။ စိတ်ချပါ ဆိုတာ နဲ့ ပြီးတော့ ကျွန်တော် သွားမှာက အဝေးကြီးမှ မဟုတ်တာ ။ စခန်းနဲ့ ခြေလှမ်း ၂၀ လောက်ဝေးတာ ဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ဟိုရောက်တော့ ကတောင် ကနေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်လာတော့ ဈေးဆိုင်က အစ်ကိုကြီးက လာခေါ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကနေတဲ့ အထဲက ခေါင်းဆောင်ကို ခေါ်လာပြီး အသစ်ရောက်လာတဲ့ ဗိုလ်လုံ ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ သိတဲ့ အတိုင်း ဟိုကလဲ...၀မ်းသာအားရ လက်ဆွဲနုတ်ဆက်ပြီး လက်ထဲက ခေါင်ရည်ကို သောက်ဖို့ ထိုးပေးပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ ကြော်ငြာ ၀င်လိုက်ပါဦးမယ်။ သည်းခံပြီး..ဖတ်ပေးကြပါ။ အဟဲဟဲ။ ကျွန်တော့်မှာက အလက်ဂျစ် ရှိတော့ အရက်သေစာလိုမျိုး ဟာတွေ သောက်ရင် ကိုယ်ယားတာကြောင့် ဘယ်လိုမှ သောက်လို့မရပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က ခေါင်းမူးတာကို အသေအလဲ ကြောက်ပါတယ်။ ဗိုလ်လောင်းမှာတုန်းကလဲ ခေါင်းမူးတဲ့ အပြစ်ပေးနည်းတွေဆို ကျွန်တော် အရမ်းမုန်းပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိဘူး။ သောက်တာကလဲ မသောက်ချင် ၊ မသောက်ရင်လည်း မခင်တွယ်ရာ ကြမယ် ဆိုတော့ ဟိုအစ်ကိုကြီးကလဲ နောက်ဆုံး မျက်စိတဖက် မှိတ်ပြပြီး ပါးစပ်ထဲ ငုံထားလိုက် ပြီးမှ ထွေးထုတ် ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို လိုက်လုပ် လိုက်ရတယ်။ နောက်တော့ သူတို့ မီးပုံးပွဲကို ပတ်ကကြပါတယ်။ ကပုံကနည်းက သိပ်တော့ မမှတ်မိပါဘူး။ ရှေ့ကို ၁ လှမ်းတိုး ၊ နောက် ၂ လှမ်းဆုတ် ၊ အပေါ်ကို ၁ လှမ်း ၊ အောက်ကို ၁ လှမ်း လားတော့ မသိတော့ပါဘူး။ လက်ချင်း တွဲပြီး ယောင်္ကျား မိန်းမ တစ်ယောက်ခြားစီ ကနေတာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်နားက ကောင်မလေး ချောချောလေးများ ရှိမလဲဆိုပြီး လိုက်ရှာတာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်လည်း ကရော ယောင်္ကျားတွေချည်းပဲ ။ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ။ အဟားဟား ။ ဆိုးတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် မယုံမရှိနဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲက ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ သောင်းကျန်းရတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ တစ်အောင့်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပြီး ၊ နုတ်ဆက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂
နေ့မှာတော့ တရုတ်နှစ်ကူးလဲ ပြီး ၊ လှုပ်ရှား သွားနေတဲ့ အဘတို့ စစ်ကြောင်းလဲ ပြန်ဝင်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဘကို သွားကြို ၊ စားဖို့သောက်ဖို့ စီစဉ်ပေးရင်း အတွေ့အကြုံတွေ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ကို မေးကြည့်တာပေ့ါ။ ဟို၂ ယောက်ကလဲ စုတ်ပြတ်နေတာပဲ။ ရေမချိုး ၊ အစာလဲ ဗိုက်ဝအောင် စားခဲ့ရမဲ့ ရုပ်တွေလဲ မပေါက်ဘူး ဆိုပြီး စတော့ လိုက်ထိုးပါလေရော။ ဒါနဲ့ သူတို့ ၂ ယောက်ကို ကြိုဝယ်ထားတဲ့ အအေးဘူးတွေ ထုတ်တိုက် ၊ ထမင်းစားဖို့ ပြင်ပေးပြီးတော့ ညရောက်တော့ မေးတာပေ့ါ။ သူတို့က တောင်တွေ တက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၊ ရွာတွေကို မဖြက်ဘဲ ပတ်သွားနေရတယ် ဆိုတာတွေ ၊ တောထဲ ထမင်းချက်စားတော့ ဟင်းမရှိလို့ ငပိဗူးနဲ့ပဲ ကစ်လိုက်ရတယ် ဆိုတာတွေ ပြောပြပါတယ်။ ရန်သူရယ်လို့လဲ ဖြစ်ဖြစ်မြှောက်မြှောက် မတွေ့ပါဘူးတဲ့ ။ ကိုယ့်ကျောပိုးအိတ် ကိုယ်ထမ်းပြီး တက်ရတယ်ပေ့ါ။ အပြင်မှာ ရဲဘော်က ထမ်းပေးတယ် ဆိုတာက မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ရဲဘော်လည်း သူ့ကျောပိုးအိတ် ၊ သူ့ရိက္ခာ ၊ ကျည်ဆန် နဲ့ ဘယ်နဲ့ ကိုယ့်ကျောပိုးအိတ်ပါ ထမ်းခိုင်းရမှာတုန်း ။ အဆင်မသင့်လို့ရှိရင် ကိုယ်ကတောင် ပြန်ထမ်းပေးရမှာ မဟုတ်လား ။ မင်းက ကံကောင်းတယ် ၊ ငါတို့ဆို စုတ်ပြက်နေတာပဲတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း အေးပါကွာ။ ငါနေမကောင်းဖြစ်လိုက်လို့ပါ။ အမှန်ဆို ငါက အတွေ့အကြုံရှိအောင် လိုက်ချင်တာ ။ အခုက မလိုက်ရတာ နာတာပေ့ါလို့ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း လိုအပ်တယ် မဟုတ်လား ။ စစ်ဥပဒေသမှာ စကားတခွန်းရှိပါတယ် “ မြေပိုင်မှ စစ်နိင်မယ်တဲ့ ” အဓိပါယ်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ မြေပြင် အခြေအနေကို ကောင်းမွန်စွာ စစ်ရေးအရ သုံးသပ်နိင် ၊ ကျွမ်းကျင်နိင်ရင် တိုက်ပွဲ အောင်မယ်ဆိုတဲ့ စကားပါ။ တကယ်လည်း ကျွန်တော် လိုက်သွားချင်တာကြောင့်ပါ။
မနက်ဖြန် ရောက်တော့ အဘက အသစ်ထပ်ရောက်လာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၃ ယောက်နဲ့ သူစခန်း ပြောင်းထားချင်တဲ့ ဆရာကြီးတွေကို ခေါ်ပါတယ် ။ တခြားစခန်းတွေမှာက အရာရှိ မရှိတာကြောင့် အရာခံဗိုလ်တွေကို စခန်းမှုးအဖြစ် ခေတ္တ တာဝန်ယူခိုင်းထားတာပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ရောက်လာတော့ အဲဒီစခန်းတွေကို ပြောင်းဖို့ ခေါ်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ၃ ယောက်ကိုလည်း အတူတူ မထားပါဘူး ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စခန်း ပျက်မှာ စိုးလို့ပါ။ ၃ ယောက်ပေါင်း လောင်းကျော် ဖြစ်မှာ ကြောက်တယ်နဲ့ တူပါတယ် ။ ပြီးတော့ ၃ ယောက်လုံး ထားလဲ အပိုပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ၃ ယောက်တည်းက ကျွန်တော် ရန်ကုန်သားက နည်းနည်းလည်တော့ အဘက သူ့နားကို ခေါ်ထားပါတယ်။ ၁ ယောက်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပင်မစခန်းနဲ့ တော်တော် ဝေးတဲ့ တပ်စွဲထားတဲ့ နေရာ ပြောင်းဖို့ ညွှန်ကြားပါတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ပင်မ စခန်းက ကြည့်ရင် လှမ်းမြင်နိင်တဲ့ တောင်ပေါ်မှာ နေဖို့ အမိန့်ပေးပါတယ်။ ၂ လ တစ်ခါ စခန်းတွေကို အလှည့်ကြ ချိန်းပေးမယ်လို့ လည်း မှာကြားပါတယ် ။ ဒီတော့ ဟို ၂ ယောက်ကလည်း စခန်းပြောင်းဖို့ ပစ္စည်းတွေ ပြန်သိမ်း ၊ ပြီးတော့ ကားအလာကို တစ်ယောက်က စောင့် ၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ စခန်းနဲ့ နီးတာကြောင့် လမ်းလျှောက်ပြီး ချီတက်သွားလေရဲ့။ အစကတော့ ၃ ယောက်နေရမယ် မှတ်တာ။ အော်....နောက်တော့ ပြန်စဉ်းစားမိတာက ဒါက ကျောင်းမှ စာသင်နေတာမှ မဟုတ်တာ။ ပျော်ပွဲစား ထွက်နေတာလဲ မဟုတ်တာကြောင့် ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ထမ်းဆောင်ရတာပဲလို့ စဉ်းစားမိပါသေးတယ် ။
၂၀၀၄ ခုနစ် မတ်လ ၂၃
စစ်ကြောင်းမှာ လူအင်အားတိုးလာတာ၍ နဂိုကတည်းက စခန်း လုံခြုံရေးကို တပ်ရင်းမှုး ( အဘ )က တိုးမြှင့်ချင်တာကြောင့် စပြီး ခိုင်းပါတော့တယ်။ အဘက တစ်ကယ့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းပါ ။ စစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာလျှင် ထိုးထွင်းဥာဏ်လဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို ကျောင်းမှာ လူများစွာနဲ့ သင်ခဲ့လို့ သိရုံပဲ သိပြီး မတက်ခဲ့ရင်တောင် လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ တကယ်တက်သိ နားလည် နိင်အောင် မြေပုံဖတ် ၊ ၀ှက်စာ ရေး/ဖော်နည်း ၊ ကြေးနန်းရေးနည်း ၊ ရှင်းလင်းတင်ပြနည်း ၊ တွေကို စာနဲ့တဖုံ ခြံစည်းရိုးကာ ၊ ပစ်ကျင်း ၊ ကတုတ်ကျင်း တူးနည်း ၊ တပ်စု အသင့် နေရာယူပုံ ၊ တပ်ဖြန့်ပုံ ၊ လူ လက်နက် ဘယ်လို ရွေးချယ်ရမယ် ဆိုတာက အစ သေသေချာချာ သင်ပေးပါတယ်။ ဒါတွေက လက်တွေ့လုပ်မှ နားလည်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီး ဆရာကြီး ၊ စစ်သည်တွေနဲ့ အတူတူ အစအဆုံး ကျင်းတူး ၊ ခြံစည်းရိုးခက် ၊ ညှောင့်ထောင် မြက်ရှင်း ၊ အစအဆုံး လုပ်ခိုင်းတာပါ။ နေကလည်းပူ ၊ ချွေးကလဲ ထွက်နဲ့ မျက်နှာတောင် ကုလားဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အဘက စစ်သည်တွေ ထမင်းစား တန်းဖြုက်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော်ကို ဆက်လုပ်စေပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီ ကတည်းက နေ့လည် ၁၂ ထိုးနေပြီ ဗိုက်က ထမင်းကြမ်းလေး စားထားတာ ဘယ်ခံနိင်ပါ့မလဲ ခင်ဗျာ။ ဒီတော့ အဘနဲ့က သူ့သားနဲ့ ကျွန်တော်က အသက်တူဆိုတော့ နည်းနည်း ချွဲရတာပေ့ါ။ ဗိုက်ဆာတယ် ဘာညာနဲ့ အပူကပ်တော့ အဘက “ ဟေ့ကောင် ၊ အရာရှိကောင်းဆိုတာ အလုပ်ကို ကိုယ့်လက်အောက်က ရဲဘော်တွေထက် ပိုကြိုးစားရတယ် ၊ ပိုလုပ်ပြရတယ် ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်းခံရတယ်ကွ ၊ ဒါတောင် အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ ရှိသေးတယ် ” ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ရမလဲ တခွန်းပဲ ပြောလိုက်တယ် “ ဟုတ် ” ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ရယ် ရဲဘော်လေးရယ် သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ တိုင်တွေကို လိုက်ရိုက်နေရပါတယ်။ နေကပူ ၊ ချွေးကထွက် ၊ ဗိုက်ကဆာ ၊ ဒီကြားထဲ သံဆူးကြိုးတွေ ကိုင်ထားပြီး သတိနဲ့ လုပ်နေရတော့ စိတ်က တိုချင်လာပြီ။ ဒါနဲ့ ဘယ်သူ့ကို တိုရမှန်း မသိတော့ ၊ အတူတူ လုပ်နေတဲ့ ဘေးနားက ရဲဘော်ကို အဘလည်း ဟိုဘက် လိုက်ကြည့်နေရော “ ဟေ့ကောင် ၊ နားလည်လား ” ဆိုပြီး ရုပ်တည်နဲ့ ပိတ်ဟောက်လိုက်တယ်။ ဒီကောင်လည်း အစက ရီရီပြုံး၂ နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာ။ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ ကြောင်သွားတာပေ့ါ။ ဘယ်ရမလဲ ကိုယ်လည်း ရုပ်တည်နဲ့ နိင်ရာကို တဆင့် ပြန်လည် ပေါက်ကွဲလိုက်တာ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲဘော်ကလည်း ဘယ်ခေပါ့မလဲ “ ဒုန်း ” ဆို သံကို ဆောင့်ရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ အော်...နိင် ရာ နိင်ရာ ။ ခဏကြာတော့ အဘက ခေါ်ပြီး ထမင်သွားစားဖို့ ပြောပါတယ်။ မစားခင် ဆရာကြီးတွေ စားတာ လိုက်ကြည့်ပေး ၊ လိုတာရှိရင် ညွှန်ကြားဖို့ပြော ၊ အားလုံးပြီးမှ မင်းစားရမယ်တဲ့ ။ အဘက တကယ်ကို တော်တဲ့ ဆရာကောင်းပါ။ သူ့ကြောင့် ကျွန်တော်ကို ရဲဘော်တွေ ချစ်လာတဲ့ အပြင် ၊ အသိပညာတွေလည်း တိုးပွားလာခဲ့ရပါတယ်။ အဘနာမည်ကတော့ ဗိုလ်မှုးခင်မောင်အေး ပါ။ အခုတော့ အငြိမ်းစား ယူသွားပါပြီ ။ ကျွန်တော်ဒီကို မလာခင်ကပါ။ ဒါနဲ့ အဘက ကျွန်တော့်ကို ရှေ့တန်းမှာ ခေါ်တဲ့ နာမည်တစ်လုံး ရှိတယ်ဗျ။ မလျိုဝှက်တော့ပါဘူး ။ ပြောပြတော့မယ် ။ ဘာလည်းဆိုတော့ “ ဗိုလ်ကြောင် ” တဲ့ ။
ဘာကြောင့် ဒီနာမည် တွင်လာလဲ ဆိုတော့ကာ......
စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုသူများ ၊ ကော်မန့်ရေးပေးတဲ့ သူများ ၊ ခဏတဖြုက် အလည်လာသွားသူများ အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားစွာ ကျေှးဇူးတင်ရှိပါသည်။
တော်တော် ဆိုးတဲ့ နာမည်ပဲ :)
ဖတ်နေရင်း ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ :)
M B L0G G E R said...
ဒီမယ် ဗိုလ်ကြောင်... (နာမည် မိုက်လို့ ခေါ်ကြည့်တာ)
ဟုတ်ပီဗျာ.. နာမည်ကတော့ အပျံစားပဲ.. :P ဟားဟား. ဘယ်ကဘယ်လိုရခဲ့တယ် ဆိုတာလေး. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရအောင် လုပ်စမ်းပါဦးဗျ.
ကောင်လေး အဲဒီ့အကြောင်းငါသိတယ်နော်။ မင်းရေးတာနဲ့ ငါသိတာ လွဲနေရင်တော့ ကွန်းမန့်ဝင်ရေးမှာနော်။
Take care ဗိုလ်ကြောင် :D
I couldn't resist to away your posts till u end it..,
Look forward to have continues posts. No matter how long u doing it, I'll come and read it for sure.
လင်းယုန်မှဗိုလ်ကြောင် လင်းယုန်မှဗိုလ်ကြောင် အသံဘယ်လောက်ကြားလဲ ဒါဘဲ
(ငါ့အသံငါကြားတယ်လို့ တော့မဖြေနဲ့ နော်)
စံပယ်သူဇာတွေအခြေအနေကောင်းရဲ့ လား ဟီးဟီး
can't wait for post 11. keep it up man! I'll come again.
၁၀ မှ ၁၁ ၊ ၁၁ မှ ၁၂ ၊ ၁၂ မှ ၁၃
နိင်ရာနိင်ရာ တော့မလုတ်ဘာနဲ့ ဗိုလ်ကြောင်ရယ်....တူကလေးနဲ့သံတွေကို သနားလိုဟ..:P
၉၀% ဘဲ့ပါတယ် :P
စာကြွင်း.....ဇော်ဂျီ အတွက် ကျေးဇူးဗျ။
ရန်ကုန်သားဆိုတော့ နယ်သားတော်လိုက်ပြီနော်... ဗိုလ်ကြောင်ဆိုတာတော့ ဟိ ဟိ... တော်တော်ကြောင် လို့လား... ဒါမှမဟုတ် အူကြောင်ကြောင် လုပ်နေလို့လား... မိုက်တယ်နော်... နာမည်က... အပြန်စားပဲ... မောင်လေးရေ... စာတွေလာဖတ်တယ်... စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်... နောက်အပိုင်းတွေ မြန်မြန်တင်နိုင်ပါစေနော်... အားပေးလျှက်...